Kunyangwe iwe wave uri mubhizimusi kweanopfuura makore gumi kana kuti wave kuda kutanga yako, kuve neinternet yakasimba yeinternet yemhando yako haigoni kutaurirana. Sezvo iwe uine hofisi yezvidhinha uye yevhu kune yako isina bhizinesi bhizinesi, iwe unofanirwa kuve uine mukurumbira wepamhepo wepamhepo uyo vatengi vako uye vanotarisira vanogona kuita nemhando yako. Uye iyo chete nzira yaunogona kukwezva, kunakidzwa, uye kukura yako kasiti vatengi pamhepo ndeyekuita inoyevedza, inoshanda webhusaiti. Sezvineiwo, iwe wakawana mukana wekunongedza chikamu chakakosha chebhizinesi rako kune rakakurumbira uye rakavimbika boka revarairidzi paSemalt.
Webhusaiti analytics inongori chiyero uye kuongororwa kwedatha yakakosha kuti unzwisise maitiro evashanyi vesaiti yako. Uine dhata chaiyo yakaiswa, iwe unogona kuita zvisarudzo zvine ruzivo uye kuita zvifungidziro zveizvo vateereri vako vangave mune ramangwana. Zvakare, kana iwe uine zvombo izvi data, iwe unogona kuronga uye kugadzira zvimwe zvinobatsira zvemukati kune vashanyi vako, uye ivo, ivo, vanozova vatengi vakavimbika kune yako brand.
Iwe unofanirwa kucherechedza data yaungazoda kuyera uye kuongorora mashandiro epasiti yako uye zvakakosha mashiniro ezviratidzo zvinokurudzira kukura kwako kwebhizinesi, sengekushandura kwekutenga, nhamba yevashanyi, mapeji anoshanyirwa kazhinji, nezvimwewo Kupfuura kuwana traffic yakawandisa kune webhusaiti yako, nerubatsiro rwezvinodiwa zvewebsite analytics zvishandiso, unogona kufambisa data rako kuti uwane zvinangwa zvebhizinesi rako.
Chii chinonzi SEO?
SEO ndiyo chidimbu cheKutsvaga Injini Yekutsvagisa, uye iko kuenderera mberi kwekuvandudza kwehuhu uye huwandu hwekutengesa kune yako webhusaiti kuburikidza ne organic yekutsvaga injini mhinduro. Sezvo iwe uchinge wagadzira online kuvapo kwebhizinesi rako, iwe uchafanirwa kugadzira zvinomanikidza uye zvakakodzera zvemukati zvinokwezva, zvinofadza, uye zvinoita kuti vateereri vako vabatane nemhando yako. Neruzivo uye nekushandisa kwakakodzera kweSEO maitiro akanakisa, unogona kugadzira mhando yemhando iyo inokwira kumusoro pamapeji ekutsvaga injini mhinduro (SERPs) uye inokwezva vashanyi kune webhusaiti yako. Paunenge uine vashanyi vakawanda pane webhusaiti yako, ndipo pamunowedzera mikana yako yekukwezva vanhu vakawanda kuti vave vatengi vako.
Heano muenzaniso wekuti SEO zvinyorwa zvinomira sei pamusoro paSERPs, uye inofanirwa kuve yako bhizinesi chinangwa kukwira kumusoro kwemashoko akakosha mune rako bhizinesi niche.
Nzvimbo yepamusoro kune avo vanokwikwidza uye vanoita vatengi nekushandisa yakakodzera yakawanda-refu muswe mazwi. Kunyanya kuita uye yepamusoro yepamusoro yezvinyorwa inokupa iwe muganho kana vatengi uye vanotarisira zvakafanana vachitsvaga zvemukati zvinogadzirisa matambudziko avo.
Sei Sarudza Semalt?
Isu tinonzwisisa kuti kwakakosha sei bhizinesi rako pamhepo kubva kune yako mutengi chigadziko uye, kunyanya kukosha kune yako yepasi mutsara. Kana iwe uchibatana nesu, isu tinokuvimbisa iwe kuti zvisinei nebasa rako rakaipa nemamwe madhijitari, takazvipira uye takazvipira kuchinja rondedzero. Iwe unogona kutora nhanho yakashinga nhasi kuenda mukuwana yakanaka musika wekugovana nevatengi uye zvinotarisirwa mu niche yako zvisinei nezera kana kukura kwebhizinesi rako.
Vashandi vedu vane tarenda vari kune yako beck uye kufona 24/7. Kutama hakusi chipinganidzo. Mutauro hausi chipinganidzo futi. Bata nesu nhasi.
Iwe uchiri unecececit pamusoro pekukura bhizinesi rako nekuda kwekunetseka kwemari kana zvimwe zvinhu? Isu tinopa inoshanduka mitengo yemitengo yakagadzirirwa kugadzirwa nebhajeti yako. Isu tinokupa iwe zvimwe zvinokurudzira zvekubatana nesu, uye isu tichafara kuva chikamu chebudiriro yako yebhizinesi nyaya.
Chii chinonzi Semalt?
Semalt ndeye yakazara-yakarongedzwa dhijitari yakarongedzwa nevashandi vane tarenda avo vakazvitsaurira kukurudzira kwakakwana uye kushanda kwewebsite yako. Uine mazvikokota mune zvakasiyana siyana zvekukura mubhizimusi repamhepo, iwe unogona kuzorora uine chivimbo chekuti iwe wakawana matarenda akanaka emari anogona kutengwa, zvisinei nekukura kwako bhajeti. Tine bhizinesi rako rakafukidzwa. Isu takabata akawanda mapurojekiti munguva yakapfuura, uye pazasi mhinduro kubva kune mumwe wedu akawanda anofara, uye anoguta vatengi.
Pasinei nezera kana saizi yebhizinesi rako, unogona kurova vanokwikwidza kumutambo wavo weSEO. Ingo tsvaga iwo mazwi akakosha anotyaira mukwikwidzi traffic yako uye uashandise kune yako saiti, uchirova ivo pamutambo wavo. Usakanda mapfumo pasi pane rako bhizinesi zvibodzwa.
Ndeapi masevhisi Anopa Semalt?
PaSemalt, chinangwa chedu chikuru ndechekukudza kuvepo kwako kwepamhepo. Uye zuva rega rega, isu takazvipira kuita bhizinesi rako rive nani. Iyi ndiyo nzira yakakosha yatinokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvebhizinesi.
Kwemakore gumi apfuura, isu takakwanirisa yedu Semalt kiyi yepamusoro yekutarisa uye Web Analyzer kuti ikubatsire:
Tarisa uone kuti webhusaiti yako inoita sei paSERPs.
Ziva webhusaiti yako pane-peji optimization zvikanganiso.
Ongorora webhusaiti yako
Gadziridzwa, uye yakazara webhu saiti mishumo.
Kunze kwekupa mabasa aya kune rako bhizinesi, tinopa webhusaiti optimization masevhisi inoona iwe unowana mhedzisiro inodiwa yebhizinesi rako. Yako webhusaiti uye zvemukati zvichakwira kumusoro kumusoro kune vakwikwidzi vako mukati menguva pfupi pfupi yaunofunga kufambidzana nesu.
Nebasa redu rinobudirira rekuongorora webhusaiti, iwe uchave wakakwaniswa nedatha yakakodzera yekuzadzisa yako seti bhizinesi zvibodzwa Tarisa uone vatengi vedu kuongororwa kwewebsite yedu analytics sevhisi.
Isu tinopa vatengi vedu SEO masevhisi zvisinei nemari yavo kana mabhizimusi saizi. Isu tinonzwisisa kuti iwe unoda maSevhisi e SEO kuti akure yako yepamhepo kuvapo kuti uwedzere yako vatengi base uye kutyaira mari, saka isu takagadzira maviri akasiyana SEO mapakeji anokodzera zvido zvebhizinesi rako.
Iwe unogona kuwana mibairo mikuru mukati menguva pfupi pfupi inokwanisika kana ukatenga yedu AutoSEO package nhasi. Nemutengo wakanyanya kuderedzwa we $ 0,99, iwe unenge uchiwana mari chaiyo yakakosha yea SEO masevhisi akagadzirirwa kuenda:
Kuvandudza kuoneka kwewebsite yako
Peji-peji optimization yemapeji ese ari pawebhusaiti yako.
Kugadzira yakakodzera nzira dzekuvaka dzewebhu yako webhusaiti.
Mazwi anotsvaga mubhizinesi rako niche
Webhusaiti analytics inotaura ichakubatsira iwe kuisa yako bhizinesi zvibodzwa.
Isu tinozvirumbidza nekupa bhizinesi rako nemasevhisi akakodzera kuti akure. Heano kutaurwa kwemutengi kugutsikana nezve yedu AutoSEO package.
Iwe zvakare unogona kutanga bhizinesi rako kukura nhasi needu AutoSEO package. Isu tinokupa iyo yakanakisa Whitehat SEO service mari inogona kutengwa.
Nayo yedu yakazara yeSESEO package, iwe unovimbiswa akanakisa eWhitehat SEO masevhisi ayo achakubatsira iwe kuoneka zviri nani kupfuura vako vanokwikwidza pasina nguva. Partner nesu nhasi kuti upe bhizinesi rako iro rinodiwa online kuwedzera kukurudzira kwako kwepamhepo mhando yekuziva. Heano mamwe e advanced SEO maitiro masevhisi akagadzirirwa kukura bhizinesi rako:
Yemukati uye yekunze webhusaiti optimization
Webhusaiti kukanganisa kwekugadzirisa
Kumanikidza zvinyorwa zvekunyora zvinyorwa
Yakakwana dhizaini kuvaka masisitimu
Mushure mekutengesa kutsigira uye kubvunza mabasa.
Haufanire kumbomira kuisa mari mubhizinesi rako kukura kune inotevera bhajeti nguva. Tifonere nhasi kuti tidzidze zvakawanda nezvehurongwa hwedu hwekubhadhara hwakasarudzika hwakavimbiswa kuti utange kukudziridza mukurumbira weindaneti.
Tine tarenda uye takazvipira vashandi vane hunyanzvi hwekugadzira mavhidhiyo anogovaniswa online nepamhepo. Iwe zvakare unoda mavhidhiyo ayo achafadza uye anokwevera vateereri vako kuti vaite nebhizinesi rako. Boka redu rekugadzira vhidhiyo rine ruzivo mukuita zvakajairika zvinhu zvinoshamisa. Unoda matarenda akanaka ekuratidza vatengi vako kuti bhizinesi rako rinogona kuvabatsira sei. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutipa mafoni nhasi, uye isu tinoshandura mazano ako muanotyisa evhidhiyo ekukudza anokuwanira mhinduro.
Yako webhusaiti, sekufanana nehofisi yako isina basa, inofanira kuve yakavakirwa zvakanaka kuti ikwezve organic traffic. Iwe unonzwisisa kuti ichi chikamu chebhizinesi rako chinogona kuita kana kuputsa bhizinesi rako. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kurega iyo nyanzvi dzichibata bhizinesi rako rewebhu rekuvandudza. Nedu anopfuura makore gumi eruzivo mukubata mapurojekiti akasiyana-siyana, unogona kuzorora uine chokwadi chekuti webhusaiti yako yekuvandudza chirongwa iri mumawoko makuru. Isu tine hanya kwazvo nebhizimusi rako, uye takazvipira kukuwanira iwe bhizinesi zvabuda zvaunoshuvira.
Chese chinhu chekuvandudza kwako webhusaiti inotarisirwa kwakaringana neakazvitsaurira timu yevashandi. Kubva pane chiratidzo chechimiro kusvika pakuitwa kwakazara, tinofara kukuzivisa iwe kuti takawana zvakanaka zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pasirese. Tarisa uone humbowo kubva kune vatengi vedu vakavimbika uye taura nesu nhasi.
Tosangana Semalt Yako Mudiki Buddy!
Yedu-mumba peturu, Turbo, yanga iri chikamu chechikwata chedu kubva pakutanga. Akave nhengo yakakosha yemhuri yeSemalt. SaTurbo, isuwo tinogona kuva chikamu chenhau rako rebhizinesi rekubudirira. Pasinei nechikamu chako chebhizimusi rekukura, tinogona kufara kubatana newe kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi rako.
Bata nesu nhasi. Yedu inoshamwaridzika uye yakazvitsaurira timu yevashandi vanofara kupindura mibvunzo yako yese pamaitiro atinogona kukura nawo chigadzirwa chako chepamhepo. Une hanya here nezvevhiringidzo yemitauro? Zvakanaka, isu tinofara kukuzivisai kuti manejimendi edu vanotaura mutauro unozivikanwa newe. Iva Chinese, Chirungu, French, Italian, Dutch, Turkish, etc., tinotaura mutauro wako. Tifonerei nhasi, uye ngatitangei kukura pamusoro pebhizimusi rako repamhepo.